Xaaluf: Korjoogteynta Warbaahinta Bulshada, Falanqaynta iyo Hawlgelinta | Martech Zone
Scup: Korjoogteynta Warbaahinta Bulshada, Falanqaynta iyo Ka Qeybgalka
Sabti, Agoosto 17, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Kalasooc qaaddo dhawaaqay - wuxuu ka bilaabmay Brazil wuxuuna hada taageeraa Ingiriisiga, Burtuqiiska iyo Isbaanishka. Ganacsiyada iyo wakaaladaha, Scup waxay leedahay dhammaan astaamaha muhiimka ah ee waqtiga dhabta ah kormeerka warbaahinta bulshada, daabacaadda iyo barxadda falanqaynta.
Scup waa aalad hogaamisa aaladda kormeerka warbaahinta bulshada waxaana isticmaala in ka badan 22 kun oo xirfadlayaal ah. Scup wuxuu ka caawiyaa maareeyayaasha warbaahinta bulshada inay awood u yeeshaan shaqadooda min dhajinta illaa falanqaynta, iyadoo si weyn kor ugu qaadeysa waxtarkooda.
Tilmaamaha Scup iyo Faa'iidooyinka
La soco baraha bulshada - Scup wuxuu shaqeeyaa 24 saacadood maalintii, 7 maalmood usbuucii, isagoo si toos ah ula socda baraha bulshada si aadan ugu qasbanayn. Diiwaangeli ereyada muhiimka ah oo aad ogaato waxa laga sheegayo magacaaga iyo kuwa kula tartamaya Twitter, Facebook, Youtube, LinkedIn, vimeo, Flickr, Orkut, Instagram, Tumblr, Slideshare, Foursquare, Google, Google+, Yahoo !, blogs, news, RSS RSS, websaydhyo iyo baraha bulshada ee kale. Kala sooc waxyaabaha la soo ururiyay sida wanaagsan, negative iyo dhexdhexaad ah iyadoo loo eegayo qiimeyntaada. Kudar tags si aad ukala saarto alaabtaada.
Aqoonso - Ogow cidda ka hadlaysa astaantaada. Waa suurtagal in la aqoonsado dadka saameynta ku leh bulshada iyo kuwa sida aadka ah uga hadlaya astaantaada, daqiiqado yar uun ka dib markii aad sameysid raadintaada. Isla markiiba soo saar wada sheekaysiga shabakadda ee madal. Scup ayaa qoraya sheekada iyo isdhexgalka, markaa waxaad si fudud diiradda u saari kartaa arrimaha mana ahan inaad ka walwasho la socoshada cidda ay tahay.
naadiya - Ku dhaji shabakadahaaga bulshada adoo adeegsanaya Scup. Isdiiwaangeli astaamahaaga Twitter, Facebook iyo Youtube oo dhaji tweets, darbiyada dhejiska iyo fiidiyowyada dhammaantood adigoon ka tagin Scup. Maamulka Scup waxaa ku jira dhowr heerar oo ku saleysan ogolaansho. Dhex-dhexaadintu waxay u oggolaaneysaa oo keliya maamulaha kormeerka inuu maamulo astaamaha, laakiin wuxuu siiyaa shaqaalaha kale awood ay ku dhajiyaan oo ay uga jawaabaan. Tan macnaheedu waa, su'aasha "lambarka sirta bulshada?" waxay noqon doontaa uun xusuus yaraanta.
Warbixinta - Abuur warbixinno iyo falanqee natiijooyinka. Lasoco horumarka kormeerkaaga adoo u maraya warbixinada qaabaysan ee lagu sifeeyay saacad, maalin, usbuuc, bil ama sanad. Xoogga saar macluumaadka loo baahan yahay si loo qiimeeyo istiraatiijiyaddaada shabakadaha bulshada. Hadana haddii aad rabto inaad gacmahaaga wasakh ka dhigto oo aad ku shaqeyso xog cayriin, taasi dhib maahan. Scup waxay ka dhoofisaa dhammaan walxahaaga kormeerka si toos ah Excel.
Qiimeynta Scup waxay la tartameysaa barnaamijyada ugu caansan warbaahinta bulshada ee warshadaha; dhab ahaan, waxaad badbaadin kartaa dhowr boqol oo doolar bishii markii la barbar dhigo xalkaaga hadda.
Tags: kormeerka waqtiga dhabta ahxoqidwarbaahinta bulshadadigniinta baraha bulshadafalanqaynta warbaahinta bulshadakormeerka warbaahinta bulshadadaabacaadda warbaahinta bulshadatabinta warbaahinta bulshada
Khadka Dhaqdhaqaaqa: Waqtiga-dhabta ah, Suuqgeynta Emailka Shaqsiyeed ee Tijaabada ah